Thwebula VirtualBox 6.1.18 – Vessoft
WindowsUkuthuthukiswaEmulators nemishini eyi-VirtualVirtualBox
Isigaba: Emulators nemishini eyi-Virtual
Ikhasi elisemthethweni: VirtualBox
VirtualBox – isofthiwe virtualize yokusebenza izinhlelo ezahlukene. VirtualBox uyakwazi sokulingisa yokusebenza izinhlelo eziningi ngokuzimela computer main, phakathi lapho kukhona izinguqulo ezihlukahlukene Windows, MacOS, Linux, Solaris, njll Isofthiwe kwenza ukudala imishini virtual nge lemali edingekile wenqama isikhala noma esifanele isitoreji uhlobo kwi drive kanzima. VirtualBox iyithuluzi elihle ukuba avivinye isofthiwe endaweni ephephile noma vakashela amawebhusayithi in the mode Sandbox. Futhi VirtualBox ikuvumela ukuba ulungiselele ukusekelwa izinhlobo ezahlukene nokuxhumana inethiwekhi, yokunamathisela okwabelwana phakathi kohlelo main kanye virtual noma uxhuma USB-amadivaysi.
Wekhasi of the yokusebenza izinhlelo ezahlukene
Gijimani wemishini virtual eziningi kanyekanye
izilungiselelo Individual ngomshini ngamunye virtual
ibhodi yokunamathisela Kubhala ngekuhlanganyela
Ukuhlanganisa of the amadeski phakathi izinhlelo main kanye guest
Amazwana ku VirtualBox
VirtualBox software ehlobene
Isiteji esiphelele sokwenza izinhlelo ezahlukene zokusebenza. Isofthiwe inikeza isethi yamathuluzi ukulungisa umshini wezinkinga ngezidingo zomsebenzisi.
Uhlelo esinamandla ukuphathwa database. Isofthiwe isekela izinhlobo ezahlukene idatha futhi kuhlanganisa amathuluzi esikhethekile isizukulwane izinhlelo SQL-code.
I-CodelobsterIDE – umhleli wokukhulisa nokwenza lula inqubo yokukhula kwe-PHP. Isoftware ikuvumela ukuthi uhlele amafayela futhi ifaka amathuluzi wokusebenza ngokunethezeka nekhodi.
Enamandla umhleli wombhalo iqoqo izici ngomsebenzi ikhiqize kakhudlwana amafayela umbhalo. Isofthiwe uyakwazi ukusheshisa kakhulu emsebenzini amafayela umbhalo.